နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ Archives - Lupyo News
January 25, 2021 by Lupyo News
မိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန်အတွက်… မျိုးသမီးမိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန် အတွက် ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီကြပါရှင့် … ။ ကျေးဇူးပြုပီး သင်သိသော အမျိုးသမီးများကိုမျှဝေပေးပါ .. ။ (သင်သည် အမျိုးသား တစ်ယောက်ဆိုပါက ယခုအကြောင်းရာ အားအမျိုးသမီးများအတွက် မျှဝေပေးပါ) အမျိုးသမီးများ ရာသီ ကာလ အတွင်း အောက်ပါ အချက်များ မလုပ်သင့်ပါ။ ဒါတွေကတော့ ၁။ ရာသီချိန် ကာလ အတွင်းရေခဲရေ၊ ဆိုဒါမသောက်သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ။ သုတေသီ များ၏ လေ့လာချက် များအရ ရာသီကာလအတွင်း ရေခဲရေ သောက်သုံးးခြင်း သည် သားအိမ်တွင်း ကျန်ရှိ ​နေသော ရာသီသွေးကိုခဲစေ တက်ပီး ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း … Read more
အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ..
အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ.. အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်းမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာတချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လက်မထပ်ပါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်က အရမ်းငယ်လွန်းပါတယ်။ ဘဝတက်လမ်းအတွက်လည်း ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရူးမိုက်ပြီးလက်ထပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအရွယ်က မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်မို့ လက်မထပ်သင့်ပါဘူး။ ( ၂ )ပုံအောပြီးမချစ်ပါနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပုံအောချစ်ထားပြီးမှ ကွဲသွားခဲ့ရင် ကိုယ်ပဲအလူးအလဲခံစားရမှာပါ။ ဒီအရွယ်မှာ မတည်မြဲနိုင်သေးတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဆို အရမ်း Serious မဖြစ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် ရှေ့ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ တွေ့ရမယ့်လူတွေက အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း … Read more
ခြေထောက် ထုံကျဉ်၊ ဆံပင်တွေကျွတ်၊ မျက်မှန်တွေ တပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်း
ခြေထောက် ထုံကျဉ်၊ ဆံပင်တွေကျွတ်၊ မျက်မှန်တွေ တပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်း ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ် ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီးဆေးလည်းရပါတယ် ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ညောင်းတာကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့ သက်သာလာမှာသေချာတယ် ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများစမ်းကြည့်ပါ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ။ ။ နောက်တစ်နည်း နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ည အိပ်ယာဝင် ခါနီးတိုင်း… ဆားနင်းခြင်း…… ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ … မနင်းခင် ခြေထောက်ကို.. … Read more
သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်(၄)ချက်
သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်(၄)ချက် ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့ခဏလေးသာ ရေစက်ပါပြီး အချိန်တစ်ခုမှာ သူစိမ်းတွေဖြစ်သွားနိုင်သလို ကိုယ်မထင်မှတ်ပဲ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူက ကိုယ်နဲ့ ဘဝတစ်သက်တိုင် အတူလက်တွဲဖို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးစာနဲ့ မတွေးခင်မှာ ကိုယ့်အနားမှာ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်ပေးမယ့် ချစ်သူမျိုးကိုတော့ လူတိုင်းလိုချင်တတ်ကြတာပါနော်။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်လွန်းပြီး နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာကို ဖော်ပြလို့နေပါတယ်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ မသွားဘူး သင်တို့ရဲ့ စုံတွဲလေးက ဘယ်တော့မှ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းမနေပဲ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ရိုးအီမသွားတဲ့ အတူဆုံချိန်တွေ၊ ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာလုပ်မယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးမယ်၊ အတူမဆုံရရင်တောင် ဖုန်းလေးနဲ့ အလွမ်းသယ်မယ် စသဖြင့် အချိန်တွေကြာလာလေလေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချည်နှောင်မှုလေးတွေ တိုးလာပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို … Read more
အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ရှိပေမယ့် စိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း…
January 23, 2021 by Lupyo News
အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ရှိပေမယ့် စိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း… အငယ်ဆုံးတွေဆိုတာ မိသားစုထဲမှာ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုး လို့ရတက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေတော့ ရှိတယ် ဒါမဲ့ စိတ်ရင်းကောင်း ထားတက်ကြသလို အချစ်ရေးမှာလည်း သူ့ချစ်သူအပေါ် အချစ်သန်ပြီး မမူးပဲ ရစ်တက်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူလေးတွေလေ သူတို့ကို ချစ်ရင် အချစ်ကြီးလွန်းလို့ အစစအရာရာ. အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်မူတွေ အပြည့်ခံရတက်ကြတယ် သူလေးတွေပါ မဟုတ်မခံ ဆိုပေမဲ့ အရာရာကို မတွေးတောပဲ တဇွတ်ထိုး နိုင်တက်ကြတယ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ တခုခု ဖြစ်လာရင် လက်မြန်ခြေမြန်တက်ကြသူတွေပါ မိသားစုအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာတော့ အရမ်းကို ကောင်းတတ်ကြတယ် အိမ်မှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ချင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ ကူညီဖို့ အမြဲတမ်း အစဉ်သင့် ဖြစ်နေသလို ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရ မညီးညူပဲ … Read more
ကိုယ်လက်ထပ်ရမယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တများ
January 22, 2021 by Lupyo News
ကိုယ်လက်ထပ်ရမယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တများ ပျိုမေတွေအတွက် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်လိုက်ရမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့တစ်ဘ၀လုံးအတူနေသွားရမယ့် ခင်ပွန်းက ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နေရမှာမို့လို့ပါ။ အဲ့ဒါမှ ကိုယ်မိသားစု၊ အနာဂတ်ကြီးဟာ သာယာဖြောင့်ဖြူးမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်လက်ထပ်ရမယ့်ယောက်ျားဟာ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရပါမယ်။ ၁။ မိသားစုကို ရှေ့တန်းတင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ် ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရည်အချင်းတွေထဲမှာ မိသားစုအတွက် ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ မိသားစုကို အမြဲရှေ့တန်းတင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ဦးစားပေးနိုင်မယ့်သူဖြစ်ရမယ်။ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိသားစုကို အမြဲရှေ့တန်းတင်နိုင်သူမှ မိသားစုအတွက် အမြဲစဉ်းစားနေသူပဲဖြစ်မှာပါ။ ၂။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကျေရမယ် ဒီတစ်ချက်ကလလည်း ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကို ကျေနိုင်ရမယ်။ အဲ့လိုကျေနိုင်မှ လည်း ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဂါင်္ရပ်နဲ့ကိုက်ညီမှာပါ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းမလုပ်စားထိုင်စားနိုင်ရင်တော့ အဲ့လိုလူမျိုးက ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ၃။ ဖခင်ကောင်းဖြစ်ရမယ် ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ ဖခင်ကောင်းဆိုတာမျိုးက … Read more
သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ဖြစ်လာစေမယ့် သော့ချက်များ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ဖြစ်လာစေမယ့် သော့ချက်များ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဒီလိုအချက်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုအချက်တွေက ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုရဲ့ သော့ချက်တွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပတာ Virginia university ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ချက်တွေအရ မင်္ဂပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပိုသာယာပျော်ရွှင် ကြပါတယ်တဲ့နော်။ တကယ်တော့ ဒါက သိပ်မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် မင်္ဂလာပွဲ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ပိုပြီးတော့တောင် အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ဖိုသီဖတ်သီ နေတတ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် နေတတ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေရှိခြင်းက အိမ်ထောင်ရေး … Read more
Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိတ်သဘောများနဲ့လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ရင်လေးစရာစရိုက်များ
January 21, 2021 by Lupyo News
Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိတ်သဘောများနဲ့လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ရင်လေးစရာစရိုက်များ Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ သူ့ချစ်သူမှန်း ကိုယ့်ချစ်သူမှန်း မသိဖြစ်လာတယ် သစ္စာတရား ကင်းမဲ့လာတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်လာတယ်။အိမ်ထောင်သယ်တွေကအပျို လူပျို လုပ်လာတယ် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ကျောင်းကန်အရောက်နဲလာတယ် စကားတွေမပီကလာပီကလာပြောမှ ခေတ်မှီတယ်အသိနဲ့ သွားကျိုးကြားကလေထွက်သလို စကားကိုမပီအောင် တမင်လုပ်ပြောလာကြတယ်… Post တင်တဲ့အခါ တင်တဲ့Postကို အသေအချာမဖတ်ပဲ ပါးစပ်အရသာခံ ချောချော မချောချော အသားယူပြောတဲ့သူတွေပေါလာတယ် လူတက်ကြီးလုပ်ပီး အကြံပေးသလိုလိုနဲ့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေပေါလာတယ် ရေးချင်တာတွေရေး postမှာ like mentရရေး အောက်ကျခံ ခင်ရင် postသစ်လာပါဦး ဆယ်လီဖြစ်ချင်ဇောတွေ များလာတယ်… အိနြေ္ဒရှင် တည်ငြိမ်သူတွေ Fbပေါ် ခေတ်နောက်ကျတယ်ဖြစ်လာကြတယ် သစ္စာတရား တန်ဖိုးထားသူတွေ ပြတိုက်ရောက် ဘဝတန်ဖိုးထားသူတွေ အပစ်ခံရ … Read more
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးကို ခဏခဏ စိတ်ကောက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်လေးကို ခဏခဏ စိတ်ကောက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း ချစ်သူမိန်းကလေးတွေက အကြောင်းမဲ့သက်သက် စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်ဘူးပါနော် ၊ ဒါ‌ လေးတွေကြောင့်မို့စိတ်ဆိုးတာပါ ကိုကိုတို့ရေ။ ရည်းစားတွေစိတ်ဆိုး ၊ စိတ်ကောက်ကြတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ စိတ်ကောက်ဖို့က မိန်းကလေးတာဝန် ၊ ချော့ရမှာက ကောင်လေးတွေတာဝန်ပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒါပေမယ့် ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးနေချိန်မှာတော့ မချော့တဲ့အပြင် `စိတ်ပဲကောက်နေတယ် ၊ အလကားနေရစ်တယ် ၊ပြဿနာရှာတယ်´ လို့ သွားပြောရင်တော့ လောင်နေတဲ့မီးကို လောင်စာပိုထည့်ပေးလိုက်သလိုပဲ ပိုအခြေအနေဆိုးသွားမယ်နော် ။ တကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဘယ်လို အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရလဲဆိုတော့ ၁။ Exအကြောင်းရှာတွေ့လို့ ။ မိန်းကလေးတွေက ဘာလောက်ပဲ ကိုယ့်ရည်းစားနောက်ကြောင်းကို ဂရုမစိုက်ဘူး ပြောပြောအနည်းဆုံးတော့ ကောင်လေးရဲ့Facebook အကောင့်ကိုဝင် … Read more
သင့်ကို တကယ်မကြိုက်ပဲ အသုံးချရုံသက်သက်တွဲတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ
သင့်ကို တကယ်မကြိုက်ပဲ အသုံးချရုံသက်သက်တွဲတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ ပျိုမေတို့ရေ တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အရမ်းချစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကို တကယ်ပြန်မချစ်ပဲ အသုံးချရုံသက်သက် တွဲတဲ့ လူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဟာ ဒီအချက်တော်တော် များများနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သူလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အမြန်ဆုံး ဖြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါနော်။ (၁) သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို အလေးမထားဘူး သင် ဝမ်းနည်းလို့ မရယ်နိုင်၊ မပြုံးနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သင့်ဘေးနားမှာနေပြီး သင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ ချော့မော့ပေးတာတွေ လုပ်ပေးရမယ့်အစား၊ သင့်ကို အတင်းပြုံးခိုင်းပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခိုင်းတဲ့ သူမျိုးပါ။ သူကတော့ သင်ပျော်တာပဲ မြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကိုပဲ ပြောမှာပါ။ အမှန်ကတော့ သင့်ကိုပျော်စေချင်လို့ မဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ အပူတွေသူ့ကို ကူးစက်မှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတစ်ယောက် ချက်ချင်းပြန်မပြုံးနိုင်တာကို … Read more